विश्वप्रकाशलाई देउवाले भने- बुढापाकालाई अर्ती दिने होइन (भिडिओ) – Nepal Press
२०७८ मंसिर १४ गते १७:३२
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणामाथि लेखिएको ‘राजनेता सुवर्णशमशेर’ नामक पुस्तक मंगलबार सार्वजनिक भयो ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा रामचन्द्र घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तक लोकार्पण गरे । कार्यक्रमका सहभागीको मुख्य चासो भने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको मन्तव्य र त्यसमाथि देउवाको जवाफमा केन्द्रित देखियो ।
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले मन्तव्यका क्रममा आफूले महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि राखेको राजनीतिक प्रस्तावको व्याख्या गरे । सभापति देउवालाई ‘एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु’ भन्दै शर्माले १ पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति, २ पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, ३ पटकभन्दा बढी मन्त्री र ४ पटकभन्दा बढी सांसद बन्न नपाउने प्रस्ताव आफ्नो पुस्ताका लागि गरेको बताए ।
‘मैले राजनीति बदल्ने प्रस्ताव बोकेर धेरै जिल्ला पुग्दा साथीहरूले शेरबहादुर देउवा त ५ पटक प्रधानमन्त्री भइसके विश्वप्रकाशको पुस्ताले त्यो अवसर र क्षमता राख्छ त ? भनेर सोध्नुहुन्छ । हाम्रो सभापतिलाई ज्योतिषले ७ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको होला तर मैले मेरो पुस्तालाई २ पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छु’, शर्माले भने ।
प्रमुख अतिथिका रूपमा मन्तव्य दिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले प्रवक्ता शर्माको जवाफ फर्काए । शर्माले ‘सल्लाह दिन्छु’ भनेको तर्फ संकेत गर्दै देउवाले अर्ती दिने काम बुढापाकाको भएको बताए । ‘बुढापाकालाई अर्ति दिने होइन, बुढापाकाको अर्ती सुन्ने हो । हतार नगर्नुस्, अर्ती दिने हैन लिनुस्’, देउवाले भने ।
उनले शर्माको प्रस्ताव ‘भन्न सजिलो तर गर्न गार्‍हो’ रहेको बताए । ‘अरुलाई भन्न त सजिलो छ आफ्नो लागि हो भने गार्‍हो छ । हतार नगर्नुस् क्या पालो आउँछ’, देउवाले भने । देउवाले शर्माको जवाफ फर्काउँदा सभागृहमा हाँसो गुञ्जिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा सह-महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीमा सहमतिका नाममा निर्णय ढिलो हुँदा पार्टीमा समस्या आएको बताएका थिए । महतलाई जवाफ दिँदै देउवाले आफू हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने नेता नभएको बताए ।
‘निर्णय भन्या जथाभावी गरेर भएन नि । हतारमा निर्णय गरेर पछुताउनु भएन नि । सोच विचार गरेर गर्ने हो निर्णय भनेको’, देउवाले भने ।
सो क्रममा देउवाले एमालेको चर्चा गर्नतिर भन्दा आफ्नो पार्टी सुधार्नतिर ध्यान दिन कार्यकर्तासँग आग्रह गरे ।
प्रकाशित: २०७८ मंसिर १४ गते १७:३२
One thought on “विश्वप्रकाशलाई देउवाले भने- बुढापाकालाई अर्ती दिने होइन (भिडिओ)”
Pushp Raj Shrestha says:
देउवा सल्लाहलाई अर्ती संझन्छन्। यिनलाई घाेक्र्याएर सभापतिबाट हटाउनु पर्छ, प्रधानमन्त्री बनिहाले भने अरु पार्टीले घाेक्रेठ्याक लाउंछन्।